Pixelmator Pro yeMac zvakare pahafu yemutengo uye inovimbisa kugadzirisa basa rayo rekucheka | Ndinobva mac
Zvichida mukwikwidzi akasimba we Photoshop izvozvi ndiPixelmator Pro.Tinogona kutaura kuti vanotamba muligi rimwe chete, zvese zvinowirirana neM1 uye zvese zvine injini dzekugadzirisa dzakasimba. Kunyangwe chiri chokwadi kuti chekutanga chine ruzivo uye zvechokwadi chiri nani, hatigone kuzvidza mabhenefiti ePixelmator ayo zvino anotisiira chirongwa chayo Hafu yemutengo uye kubheja pakuvandudza chimbo chayo chakakurumbira chekucheka.
Nguva nenguva, ivo vanogadzira Pixelmator Pro yeMac vanotishamisa nezvimwe zvakanaka muzvikamu zvechirongwa kana mumutengo. Pane ino nguva, tinogona kutaura izvozvo tinotaura zvese. Tine kudzikiswa kwemitengo uye vimbiso kubva kukambani inotaura kuti munguva pfupi pfupi tichava nemashandiro matsva anozovandudza zvikuru chirongwa ichi.
Kwete yekutanga nguva tine kuderedzwa mumutengo muhafu, senguva ino. Saka ikozvino kana iwe wafunga kutenga chirongwa ichi zvinodhura iwe 21, 99 euros, pachinzvimbo cheinenge makumi mana nemana iyo inodhura nguva dzose.
Asi isu zvakare tinofanirwa kutaura kuti mune inotevera vhezheni yechirongwa, 2.1 tichava neruzivo rwakakosha maererano nechishandiso chayo chekucheka chinofambiswa neMuchina Kudzidza. Iyo nyowani mashandiro ichaongorora kuumbwa kwemifananidzo uchishandisa muchina wekudzidza algorithm uye nekupa zano rekuti zvaigona sei kurima iyo pikicha kuti iwedzere kutora maziso. Saka zvirinani zvinotsanangurwa kubva yako blog post.
«Pamusoro pazvose, tinoda basa iri rinonakidza", Vagadziri vanodaro, vachiwedzera kuti iko kunyorera" kunopa maitiro akasiyana echimwe chiitiko chekugadzirisa mapikicha. " Ivo havazi vatsva kune aya ma parameter sezvo Pixelmator Pro yatove inosanganisira michina yekudzidza maficha senge Super Kugadziriswa, iyo inokudza mifananidzo isingarasikirwe neupamhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Pixelmator Pro yeMac zvakare pahafu yemutengo uye inovimbisa kuvandudza basa rayo rekucheka